Xaalka Qudus: Dalalka Ururka Iskaashiga Islaamka oo kulan gaar ah ku leh Istanbul – Kasmo Newspaper
Xaalka Qudus: Dalalka Ururka Iskaashiga Islaamka oo kulan gaar ah ku leh Istanbul
Updated - December 13, 2017 11:48 am GMT
London (Kasmo), Madaxda Dawladaha iyo wakiillada saree e siyaasadda 57da dal ee Ururka OIC ee Iskaashiga Islaamka ayaa maanta ku shiraya magaalada Istanbul, waxaana isugu yeeray dalka Turkiya oo haya guddoonka wareegga ah, si loo qeexo mowqif midaysan oo dunida Islaamku ka yeelato go’aankii Trump ee Qudus.
Madaxda soo xaadirtay waxaa ku jira Madaxweynayaasha Iiran, Xasan Ruuxaani, Boqorka Urdun Cabdalla, Soomaaliya Maxamed cabdullahi Farmaajo iyo Lubnan Michel Aoun oo isagu Kirishtan ah laakiin hoggaamiya dal diimo kala duwan looga cibaadaysto.
Guddoonka Shirweynaha, Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, oo kulanka ku tilmaamay “bartii laga dhaqaaqi lahaa” ayaa ku dhawaaqay “In la aqoonsado Dawladda falastiin oo xuduudeheedu kuwii 1967kii yihiin”.
Madaxweynaha oo baaqaas ku furay kulanka ayaa ku daray: “Ugu yaraan 196 dal oo xubno ka ah Qarammada Midoobay ayaa ka soo horjeestay go’aankii Trump ku aqoonsaday in Qudus tahay Caasimadda Israel”.
Wuxuu kale oo ku daray in “Israel tahay Dawlad dal ayan lahayn haysata argagixisana ah, askarteeduna argagixiso yihiin, dilaya oo xiraya carruur 10 jir ah”, isaga oo muujinaya sawir maalmahaan wareegaya Baraha Bulshada caalamka ee wiilka reer Falastiin ee indhaha ka xiran, kuna hareereysanyihiin militariga Israel.
Madaxweynaha falastiin, Maxamuud Cabbas Abu Mazen oo isna shirka ka hadlay ayaa caddeeyay in reer Falastiin, hadda ka dib, aqbali doonin dhexdhexaadinta Maraykanka ee Bariga Dhexe.